Welcome to IWT | IWT
schedule for route
Trips & Sailing Program of Myitwa Division
Trips & Sailing Program of Rakhine Division
Trips & Sailing Program of Ayeyarwady Division
Trips & Sailing Program of Thanlwin Division
Trips & Sailing Program of Chindwin Division
Welcome to IWT
The present IWT's forerunner was set up in 1865. At that time the organization functioned asaprivate enterprise under the name of Irrawaddy Flotilla Company Limited (IFCL). Under the plan to provideanew administrative order, the " Inland Water Transport Board" was renamed as " Inland Water Transport Corporation" in 1972. It has been changed to the present name of "Inland Water Transport" with effect from 1st April 1989.
“ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ထမ်း မိသားစုများ၏ (၁၂) အကြိမ်မြောက် စုပေါင်း မဟာဘုံကထိန် သင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပ”
ကမ်းရိုးတန်းသွား "ကစ္ဆပနဒီ (၃)" အမြန် ရေယာဉ်ဖြင့် စစ်တွေ-ကျောက်ဖြူ တိုက်ရိုက် ကမ်းရိုးတန်း ခရီးစဉ် ပြန်လည် ပြေးဆွဲ
ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ကမ်းရိုးတန်းသွား ရေယာဉ်သစ် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း။
ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး အတွက် လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီ (၄၅၀၀၀) ဂါလန်ကို ဝယ်ယူရန် တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း
Myanmar Daily Weather Report (Issued at 2:00 pm Monday 08th June, 2020)
Myanmar Daily Weather Report (Issued at 2:00 pm Wednesday 27th May, 2020)
Myanmar Daily Weather Report (Issued at 2:00 pm Monday 25th May, 2020)
Myanmar Daily Weather Report (Issued at 2:00 pm Monday 11th May, 2020)